ဟာဝိုင်ယီ Photoreal Vol 1 + Vol2+ Vol3ကို install FSX & P3D
ဟာဝိုင်ယီ Photoreal Vol 1 + Vol2+ Vol3ကို install FSX & P3D 1 months ago2တစ်နှစ် #1414
ဟာဝိုင်ယီ Photoreal Vol 1 + Vol2+ Vol3ကို install အကူအညီတောင်းတောင်းဆိုခြင်း FSX & P3D
ပထမဦးစွာငါပျံသန်း Simulator ကိုများအတွက်အများအပြားစိတ်ဝင်စားဖို့ Add Ons များအဘို့အလွန် RIKOOO အပေါင်းတို့နှင့် developer များကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်အပေါင်းတို့၏ P3Dv4 ။
ရှိပြီးသားအချို့သောလေယာဉ်ကိုအသုံးပြုပြီးနောက်မှာကျွန်မရှုခင်းဟာဝိုင်ယီ Photoreal ဤအချိန်ကို download လုပ်ချင်တယ်။ သို့သော်လည်းငါသည်တပ်ဆင်ဖို့မရခဲ့ပါဘူး!
"ဂျမ်ဘို" နှင့်များစွာသောနာရီနှင့်အတူဖိုင်ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးနောက်, ငါ 5,77 GB ကို (6.200.281.837 Bytes) နဲ့ဇစ်ဖိုင်ကို unpacked မရနိုင်ကြောင်းသတိပြုမိ
→ "ဖိုင်ထုတ်ယူခြင်းမအောင်မြင်ပါ။ archive ကိုပျက်စီးနိုင်၊ မဖတ်နိုင်၊
ငါကို download ထပ်ခါတလဲလဲ - အတူတူပင်အနုတ်လက္ခဏာအောင်မြင်မှုတွေနဲ့!
ကြင်နာစွာ Axel နှင့်စပ်လျဉ်း
ဟာဝိုင်ယီ Photoreal Vol 1 + Vol2+ Vol3ကို install FSX & P3D 1 months ago2တစ်နှစ် #1415
ဒီကနေ့ငါဒီရှုခင်းကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးပြaနာမရှိဘဲ unzip လုပ်ပြီးထည့်သွင်းနိုင်ခဲ့တယ်။ သင် Windows မှပုံမှန် unzipping system ဖြင့် archive ကို unzip လုပ်ရန်သို့မဟုတ် WinRar သို့မဟုတ်အခြား software တစ်ခုခုကိုအသုံးပြုနေပါကပြုပြင်ရန်ကြိုးစားသင့်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
ဟာဝိုင်ယီ Photoreal Vol 1 + Vol2+ Vol3ကို install FSX & P3D 1 months ago2တစ်နှစ် #1416
, Erik မင်္ဂလာပါ
ကောင်းမွန်သောအစွန်အဖျားများအတွက်အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ဒါဟာငါ့အမှားရှိ၏ ငါသိသာဒီကြီးမားတဲ့ archive ကို decompress နိုင်ဘူးတစ်ခုသိမ်းဆည်းအစီအစဉ် (NCH Expresszip) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ WinRAR အတူကဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင်အတွက်တပ်ဆင်ခြင်း P3D v4 အလုပ်လုပ်ခဲ့ - အံ့သြစရာ !!!